RAHARAHA APOLLO 21 : Tsy nanda ny fikasana haka fahefana i Paul Rafanoharana – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:57
Hitohy anio ny fotoam-pitsarana.
Accueil/Politika/RAHARAHA APOLLO 21 : Tsy nanda ny fikasana haka fahefana i Paul Rafanoharana
Niaiky Andriamatoa Paul Rafanoharana, nandritra ny fihainoana azy teny amin’ny fitsarana omaly, fa nanoratra ny taratasy mirakitra ny tetibola mety ho ilaina amin’ny raharaha Apollo 21 ny tenany. Nolaviny kosa anefa ny filazana fa efa nisy drafitra maty paika ny fanatanterahana ity Apollo 21 ity, noho ny mbola tsy fisian’ny daty sy ny fotoana hanatanterahana azy tao anatin’ny taratasy. Izany hoe, mbola eritreritra fotsiny ihany fa tsy efa hoe “tetika maty paika” akory ny Apollo 21, araka ny nambarany.
Lucien R. 8 décembre 2021
Andro faharoan’ny Fitsarana ireo voampanga ao anatin’ny raharaha Apollo 21 omaly. Nanomboka tamin’io omaly io ihany koa ny fihainoana voalohany ireo voampanga ireo, ka nisantatra izany Andriamatoa Paul Rafanoharana, izay voasokajy ho isan’ny atidoha nikotrika ny teti-dratsy Apollo 21. Nanodidina ny tamin’ny 10ora teo ho eo no nanomboka ny fotoam-pitsarana tetsy Anosy. Ary samy nampiasaina avokoa na ny teny malagasy na ny teny Frantsay nandritra ny fihainoana azy.
Tamin’ny ankapobeny, tsy nisy nolavin’i Paul Rafanoharana ireo voasoratra rehetra tao anatin’ny taratasy nosoratany mahakasika ny raharaha Apollo 21. Isan’izany ny taratasy mirakitra ny tetibola ilaina amin’ity raharaha ity. Nambarany fa eritreritra fotsiny ihany ny voarakitra rehetra ao anatin’izany fa tsy mbola nisy drafitra fanatanterahana, toy ny daty sy ny fotoana hanaovana izany. Na dia niezaka nandray tsirairay ireo teboka nangataham-panazavana tamin’I Paul Rafanoharana aza ireo mpitsara, dia saika naravon’ity voampanga ity amin’ny hoe eritreritra fotsiny ihany izany, fa tsy mbola drafitra maty paika.
Na izany aza, fanazavana nentin’i Paul Rafanoharana omaly teo anatrehan’ny Fitsarana ny hoe tsy ny Filohan’ny Repoblika velively no nokasaina ho vonoina tao anatin’ny raharaha Apollo 21. Fanadiovana ireo vondrona mafia manodidina ny Filoha Andry Rajoelina, izay manelingelina azy tsy hahafahany miasa ankalalahana, kosa no noheveriny ho atao. Mikasika ny fitaovam-piadiana izay hita tao an-tranony kosa indray, nilaza izy fa tsy porofo anamarinana fikasana hanongam-panjakana ny fisiana fusil à pompe tao an-tranony. Ary momba ilay vola 900 tapitrisa ariary izay tratra tao an-tranony, dia nambarany fa vola saika hividianana volamena iny.
HAINO AMAN-JERY: Tsy azo amidy sy afindra ny fahazoan-dalana hitrandraka
FANODINANA VOKATRA MALAGASY: Indostria iray isaky ny distrika no tanjon’ny Fanjakana
FIFANDONANA AMIN’NY ELEFANTA: Efa any Abidjan avokoa ireo mpilalaon’i Barea
KARIERA ANDILANA AVARATRA : « Fitrandrahana tsy ara-dalàna no nataon’ny vahoaka » hoy ny Minisitra Fidiniavo Ravokatra
ANDRY RAJOELINA TAO IHOSY: Nitokana fotodrafitrasa momba ny filaminam-bahoaka, rano fisotro madio, fihariana